China IP65 Civil Defence kwadoro LED nrụpụta ọkụ mberede na ụlọ nrụpụta | Saselux
Ụlọ na-akpụzi ABS
Nọgidesiri ike na ọnọdụ arụ ọrụ anaghị arụ ọrụ
Voltage mbata: 110-240V
Ike oriri: 1.6W max, 300LM
Ommepụta: 3W max.
Oge mwepu: awa 3
① [Elekere zuru ezu] Ejiri ọkụ ọkụ mberede ọkụ nke ụlọ ABS na-akpụzi ya. Ọ kwadoro ma na-arụkwa ọrụ ọnọdụ. 3.6V nickel cadmium batrị dị elu, 110-240V maka ngwa mberede obibi na azụmahịa.
② [Akwụkwọ ikike afọ 5] Enyerela ọkụ mberede mberede nke SASELUX UAE-COC, TUV, UL na CE. Anyị na -ekwe nkwa akwụkwọ ikike afọ 5 maka akụkụ eletriki na ụlọ, akwụkwọ ikike afọ abụọ maka batrị. Ogo dị elu na ọnụ ala dị ala bụ ọrụ anyị kacha elu.
③ [Ọdịdị dị elu] Ogo kacha mma bụ nkwa onye ahịa ọ bụla. A na -eji ọkụ mberede a eme ihe ụlọ THERMOPLASTIC ABS. Nke a agaghị aka nká mgbe ejiri ogologo oge wee hụ na ihe ọ bụla siri ike n'oge nrụnye na mgbakọ. Bọtịnụ ule ejiri ọkụ ọkụ mberede a emeela ule 2000 iji hụ na ọkụ mberede nwere ike ịgba ọkụ na -akpaghị aka n'oge ike adịghị, bọtịnụ ule agaghị ada ada mgbe ike lọghachitere.
[Ogologo Oge Mberede] Ndabere batrị nickel cadmium 3.6V na -enye oge mwepu awa 3 n'oge ọkụ.
[Ozi SASELUX] SASELUX hiwere na 2011, nwere ahụmihe na nrụpụta butere ọkụ mberede na ngwaahịa eletriki ruo ọtụtụ afọ. Dị ka akara gburugburu na-etinye aka na mmepe, mmepụta, ire na ọrụ ọkụ na ngwaahịa eletriki maka ahịa n'ụwa niile, anyị na-etinye teknụzụ teknụzụ na nhazi ngwaahịa na usoro nrụpụta. SASELUX na -ere nde ngwaahịa elektrik 70 kwa afọ. Ugbu a, anyị nọ ebe a maka gị oge niile, yana ngwaahịa kacha mma.
Nke gara aga: Ọstrelia Standard LED Emergency Down Light
Osote: Akara Ọpụpụ Ọkụ kacha mma na North America